Asomafo Nnwuma 21 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 21:1-40
21 Afei bere a yetumi ne wɔn tetew mu na yesii nsu ani no, yɛkɔɔ tẽẽ koduu Kos, na ade kyee no yɛkɔɔ Rodo, na yefi hɔ kɔɔ Patara. 2 Na bere a yehuu hyɛn bi sɛ ɛretwam akɔ Foinike no yɛkɔforo kɔe. 3 Afei yeduu baabi a yɛn ani tua Kipro+ supɔw no, yesian ho wɔ benkum fam kɔɔ Siria,+ na yekogyinaa Tiro, efisɛ ɛhɔ na na wobeyi hyɛn no mu nneɛma.+ 4 Yɛkɔhwehwɛɛ asuafo no huu wɔn na yɛtenaa hɔ nnanson. Nanso wɔnam honhom+ no so ka kyerɛɛ Paulo mpɛn pii sɛ onntu ne nan nnsi Yerusalem. 5 Enti bere a yedii nna no wiei no, yesii kwan so toaa yɛn akwantu no so; na wɔn nyinaa, a mmea ne mmofra nyinaa ka ho, begyaa yɛn kwan koduu kurow no kurotia. Na yebuu nkotodwe+ wɔ mpoano hɔ bɔɔ mpae, 6 na yɛne wɔn dii nkra+ wiei no, yɛkɔforoo hyɛn no na wɔsan kɔɔ wɔn afie mu. 7 Afei ɔkwan a yetu fii Tiro no de yɛn koduu Ptolemai, na yekyiakyiaa anuanom no dii wɔn nkyɛn da koro. 8 Ade kyee no, yesiim baa Kaesarea,+ na yɛkɔɔ ɔsɛmpakafo Filipo a na ɔka mmarima baason+ no ho no fie, na yɛtenaa ne nkyɛn. 9 Ná ɔbarima yi wɔ mmabea baanan, mmaabun a wɔhyɛ nkɔm.+ 10 Nanso bere a yedii nna kakra wɔ hɔ no, odiyifo bi a wɔfrɛ no Agabo+ fi Yudea bae, 11 na ɔbaa yɛn nkyɛn bɛfaa Paulo abɔso kyekyeree ne nan ne ne nsa kae sɛ: “Sɛnea honhom kronkron se ni, ‘Saa kwan yi so na Yudafo bɛkyekyere+ ɔbarima a abɔso yi yɛ ne de no wɔ Yerusalem na wɔayi+ no ahyɛ amanaman mufo nsa.’” 12 Enti bere a yɛtee saa no, yɛne wɔn a wɔwɔ hɔ no nyinaa fii ase srɛɛ no sɛ ɔnnkɔ+ Yerusalem. 13 Ɛnna Paulo buae sɛ: “Dɛn na moreyɛ yi sɛ mode su+ ma me koma bubu?+ Munnya abotɔyam, ɛnyɛ sɛ masiesie me ho sɛ wɔbɛkyekyere me nko na mmom sɛ mewu+ nso wɔ Yerusalem ama Awurade Yesu din.” 14 Bere a wansesa n’adwene no, yɛfaa no saa ara kae sɛ: “Yehowa pɛ+ na ɛnyɛ hɔ.” 15 Nna yi akyi no, yɛboaboaa yɛn ho maa akwantu no na yesiim kɔɔ Yerusalem.+ 16 Na asuafo a wofi Kaesarea+ no mu bi nso ne yɛn kɔe de yɛn kɔmaa ɔbarima a yɛbɛsoɛɛ ne fie no, Kiproni bi a wɔfrɛ no Mnason a na ɔka asuafo a wodi kan no ho no. 17 Bere a yeduu Yerusalem+ no, anuanom de anigye gyee yɛn.+ 18 Na ade kyee no, Paulo ne yɛn kɔɔ Yakobo+ nkyɛn, na na mpanyimfo no nyinaa wɔ hɔ. 19 Na okyiaa wɔn fii ase kaa nea Onyankopɔn nam ne som adwuma+ no so yɛe wɔ amanaman no mu ho nsɛm+ nyinaa. 20 Wɔtee eyi no, wofii ase hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Onua, woahu Yudafo mpempem a wɔyɛ gyidifo; na wɔn nyinaa yɛ nnam wɔ mmara no ho.+ 21 Nanso wɔate wo ho asɛm sɛ worekyerɛkyerɛ Yudafo a wɔwɔ amanaman mu nyinaa ma wɔawae afi Mose ho,+ na woka kyerɛ wɔn sɛ wonntwa wɔn mma twetia+ na wonnni amanne no so. 22 Enti afei, dɛn na yɛbɛyɛ wɔ ho? Nea ɛbɛyɛ biara wɔbɛte sɛ woaba. 23 Enti yɛ nea yɛreka akyerɛ wo yi: Yɛwɔ mmarima baanan a wɔahyɛ bɔ. 24 Fa saa mmarima yi kɔ+ na wo ne wɔn nkodwira mo ho na tua ka ma wɔn,+ na wonyi wɔn ti.+ Na ɛbɛma obiara ahu sɛ wo ho asɛm a wɔate no nyɛ nokware, na mmom wonam pɛpɛɛpɛ na wo ara nso wudi mmara no so.+ 25 Na gyidifo a wofi amanaman mu no de, yɛde gyinae a yɛasi no akɔma wɔn sɛ wɔntwe wɔn ho mfi nea wɔde abɔ afɔre ama abosom+ ne mogya+ ne mmoa a wɔakum wɔn a wɔanhwie wɔn mogya angu+ ne aguamammɔ ho.”+ 26 Ɛnna ade kyee no, Paulo faa mmarima no ne wɔn kodwiraa wɔn ho,+ na wɔkɔɔ asɔrefie hɔ kɔbɔɔ da a wobewie+ ahodwira no ho amanneɛ, ansa na wɔde wɔn mu biara ho ayɛyɛde+ ama.+ 27 Afei bere a nnanson+ no reba awiei, na Yudafo a wofi Asia huu no wɔ asɔrefie hɔ no, wofii ase maa nnipa no yɛɛ gyegyeegye+ na wosusoo ne mu, 28 na wɔteɛteɛɛm sɛ: “Israel mmarima, mommɛboa! Oyi na ɔkyerɛkyerɛ nnipa nyinaa wɔ baabiara de sɔre tia ɔman+ no ne Mmara ne beae yi, na nea ɛsen ne nyinaa no, ɔde Helafo baa asɔrefie ha de beguu kronkronbea yi ho fĩ.”+ 29 Nea ɛte ne sɛ na wɔadi kan ahu Efesoni Trofimo+ sɛ ɔka ne ho wɔ kurow no mu, na na wosusuw sɛ Paulo de no baa asɔrefie hɔ. 30 Na kurom hɔ nyinaa yɛɛ gyegyeegye,+ na kurow no nyinaa bɔɔ twi bae; na wosusoo Paulo mu twee no fii asɔrefie hɔ.+ Na ntɛm ara wɔtotoo apon no mu. 31 Na bere a wɔrehwehwɛ sɛ wobekum no no, asraafokuw so ɔsahene no nyaa amanneɛbɔ sɛ Yerusalem nyinaa ayɛ gyegyeegye;+ 32 na ntɛm ara na ɔfaa asraafo ne wɔn mpanyimfo kɔɔ wɔn so.+ Bere a wɔn ani bɔɔ ɔsahene+ no ne asraafo no so no, wogyaee Paulo hwe. 33 Ɛnna ɔsahene no bɛn hɔ kosoo no mu hyɛe sɛ wɔmfa nkɔnsɔnkɔnsɔn abien ngu no;+ na ofii ase bisaa onipa ko a ɔyɛ ne nea wayɛ. 34 Nanso nnipa no mu bi teɛm ka eyi, na ebinom nso aka asɛm foforo.+ Enti bere a wantumi anhu asɛm no mu yiye esiane sakasakayɛ no nti no, ɔhyɛe sɛ wɔmfa no mmra asraafo asoɛe hɔ.+ 35 Nanso bere a oduu atrapoe no so no, esiane nnipakuw no basabasayɛ nti, asraafo no maa no so; 36 na nnipadɔm no kɔɔ so dii akyi teɛteɛɛm sɛ: “Munyi no hɔ.”+ 37 Na bere a wɔreyɛ de no adu asraafo asoɛe hɔ no, Paulo bisaa ɔsahene no sɛ: “Mewɔ hokwan sɛ meka asɛm bi kyerɛ wo anaa?” Ɔkae sɛ: “Wubetumi aka Hela kasa? 38 Ɛnyɛ wone Egyptni a nnansa yi ara wokɔfaa amammɔesɛm+ bae a wode mmarima mpemnan a wɔtwe sekan fii adi kɔɔ sare so no?” 39 Ɛnna Paulo kae sɛ: “Nokwasɛm ni, meyɛ Yudani+ a mifi Tarso+ a ɛwɔ Kilikia, kurow a ɛwɔ din no mu. Enti mesrɛ wo, ma me kwan na me ne ɔmanfo no nkasa.” 40 Bere a ɔde hokwan maa no no, Paulo a na ogyina atrapoe so no nyamaa+ ne nsa kyerɛɛ nnipa no. Afei bere a ɛhɔ yɛɛ komm no, ɔde Hebri+ kasa kyerɛɛ wɔn sɛ:
Asomafo Nnwuma 21